China Umatshini wokutshiza amanzi emanzi kunye nabathengisi | Lianggong
1. Ukuxhotyiswa nge-boom yokusonga, ubude be-spray ephezulu ngu-17.5m, ubude obuphezulu be-spray yi-15.2m kunye nobubanzi obukhulu be-spray yi-30.5m. Umda wolwakhiwo ngowona mkhulu eTshayina.
2. Inkqubo yamandla ombini ye-injini kunye nemoto, i-hydraulic drive epheleleyo. Sebenzisa amandla ombane ukusebenza, ukunciphisa ukukhutshwa komsi kunye nongcoliseko lwengxolo, kunye nokunciphisa iindleko zokwakha; Amandla e-chassis anokusetyenziselwa isenzo esingxamisekileyo, kwaye zonke iintshukumo zinokuqhutywa ukusuka kwisitshixo samandla esisisisi. Ukusebenza okunamandla, ukusebenza okufanelekileyo, ukugcinwa okulula kunye nokukhuseleka okuphezulu.
3.Yisebenzisa i-hydraulic double-bridge drive kunye ne-wheel-wheel steering chassis, enendawo encinci yokujika, ukumila okwenziwe nge-wedge kunye ne-horoscope, ukuhamba okuphezulu kunye nokusebenza kolawulo. Ikhabhathi inokujikeleza i-180 ° kwaye ingaqhutywa ngaphambili nangasemva.
4. Exhotyiswe ngenkqubo yokupompa ipiston esebenza kakuhle, umthamo wenaliti ubuninzi unokufikelela kwi-30m3 / h;
5.Idosi yokusetha ngokukhawuleza ilungelelaniswe ngokuzenzekelayo ngexesha lokwenyani ngokufuduka kokumpompa, kwaye isixa sokuxuba ngokubanzi yi-3 ~ 5%, ecutha ukusetyenziswa kwearhente yokumisela ngokukhawuleza kunye nokunciphisa iindleko zokwakha;
6. Inokuhlangabezana nokumbiwa kwecandelo elipheleleyo likaloliwe ongomnye, umkhondo kaloliwe ophindwe kabini, istreyway, uloliwe ohamba ngesantya esiphezulu, njl.njl. Invert nayo inokusingathwa simahla kwaye umda wolwakhiwo ubanzi;
7. Isixhobo sokukhusela ukhuseleko kwilizwi elikhuthazayo nelokuhambisa ialam, ukusebenza ngokukuko kunye nokukhuselekileyo;
8. Ukuphakama okuphantsi, uthuli oluncinci kunye nomgangatho wokwakha ophezulu.
Amandla isiguquli 75kw
Umthamo wokukhupha 10m³ / min
Ukusebenza uxinzelelo zeemoto 10bar
Inkqubo yokukhawulezisa inkqubo
Imo yokuqhuba Ukuqhuba-wheel ezine
Uxinzelelo oluphezulu lwesantya 20bar
Ukufuduswa kwethiyori okuphezulu kwamafutha 14.4L / min
Ukukhawulezisa ivolumu yetanki yearhente 1000L
Imodeli yeChassis Isisu semoto esenziwe nguwe
Isondo lamavili 4400mm
Umkhondo we-asi engaphambili 2341mm
Umkhondo we-asi engasemva 2341mm
Isantya sokuhamba siphezulu 20km / h
Ubuncinci bokujika irediyasi I-2.4m ngaphakathi, 5.72m ngaphandle
Ubuninzi beqondo lokunyuka 20 °
Ubuncinane bokucoca umhlaba 400mm
Umgama weBraking 5m (20km / h)
Ukutshiza ukuphakama -8.5m ~ + 17.3m
Spray ububanzi ± 15.5m
I-boom pitch angle + 60 ° -23 °
Ingalo yomphambili wekona + 30 ° -60 °
I-Boom ejikelezayo 290 °
Icandelo elinamacandelo amathathu lasekhohlo kunye nekona ejikelezayo yasekunene -180 ° -60 °
Ingalo telescopic 2300mm
Axial ujikelezo lomnini umlomo 360 °
Ngomlomo isihlalo yezihlunu ujingi 240 °
Umlomo deflection engile ukuxubha
I-8 ° × 360 ° iyaqhubeka ngokungenasiphelo
Egqithileyo Ibhodi engenaManzi kunye neTrolley Work Work
Okulandelayo: Ikholamu yeplastiki formwork
Umxube wamanzi wekhonkrithi wokutshiza umatshini weShotcrete
Umatshini weShotcrete emanzi